Nin soomaali ah oo weerar ka geeystay ciidan u dhashay dalkaasi Beljim | Somaliska
Nin soomaali ah oo la sheegay inuu faas ku hubeeysnaa ayaa xalay faas ku weerarray askar u dhalatay dalka Beljim, askartan oo ku sugnaa meel ka mid ah xarrunta dalkaasi ee Brussels.
Ninkan weerarka geestay ayaa da’diisa lagu sheegay 30 waxaa toogtay ciidanka, isagoo markii dambane dhaawacii soo gaaray ugu dhintay isbitaalka. Ninkan ayaa ka hor intaan la toogan waxaa uu dhaawac u geeystay mid ka mid ah askartii uu faaska ku weeraray. Booliska iyo milateriga ayaa xiray goobta falkaasi ka dhacay, oo lagu magacaabo Boulevard Emile Jacqmain, kuna taallay bartamaha caasimadda Brussels.
Ninkan oo markii weerarka geeysanayayey ayaa ku dhawaaqayey ereyo ay ka mid yihiin Allaahu akbar,waxaana xafiiska dacwad oogaha dalkaasi ay sheegeen ineeysan aqoonsaneyn taageeradda uu ninkani u hayey kooxaha argagaxisadda.
Ugu dambeeyntiina Milateriga dalkaasi ayaa ka qeyb qaadanaya sugidda ammaanka, gaar ahaan caasimadda Brussels tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii dhacay bishii maarso sanadkii 2016, kaasoo ay ku dhinteen 32 qof. Caasimadaha Yurub-na waxaa ay ku jiraan foojignaan dheeri ah, ayadoo laga casbi qabo in waqti kasta dhici karo falal argagaxiso oo ay soo qaadaan kooxda Daacish.
August 29, 2017 at 18:11
war af somaliga iska sax. Mise waxaad tahay Wariye Qooto Qooto?